Banyere Anyị - Qingdao CO-NELE Group Co., Ltd
Qingdao CO-NELE Group Co., Ltd e estabilished na 1993. Site ugbu a anyị na-isi nwere atọ mmepụta bases na-karị dị na 1.Qingdao Shangdong, 2.Xi'an Shanxi na 3.Liuzhou Guangxi. Setted elu 28 Corporate Service itieutom na anụ ụlọ na esenidụt ..
"CO-NELE ika" na-esite n'aka German elu na iwu siri ike oru na nkà ihe ọmụma, anyị na-achọkwa na teknuzu nnyocha, mmepụta, ahịa na mgbe-sales ọrụ ọnụ.
Construction igwe gụnyere ọganihu mgbapụta Truck 25m na 56m, Concrete ịtụkwasị ọganihu Mobile ụdị HGY13 ka HGY23, Self rịa ụdị 24m na 35m, Obere ezi nchịkọta XBS Oghere Usoro Ihe mgbapụta 20-40m3 / h, JBT Serial Concrete igwekota mgbapụta 30-40m3 / h, HBT Serial Concrete Pump30-100m3 / h, Shotcret spraying Machine, Batching Plant na na.
Ugbu a, anyị na ngwaahịa pụrụ ịchọta nile China ma e-exported na Russia, Korea, Kazakhstan, Iran, Mongolia, Egypt, Singapore, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Australia, Romania, America, Niger, Congo, Mauritius na mba ndị ọzọ . CO-NELE na ya super arụmọrụ na nchekwube spirit na-eje ozi niile nke ụwa.
Mgbapu 58m na ngwaahịa